Maninona ny fanatanjahan-tena irery no tsy mamela ny kilao hilatsaka
Ahoana ny fampifangaroana ny fanatanjahantena amin'ny fiainanao andavanandro ary hampihena ny lanjanao
Olona nofinofy miaraka amin'ny programa fanatanjahan-tena mahomby
Maninona ianao no afaka mampihena ny lanjanao mora kokoa sy maharitra amin'ny fanatanjahan-tena
Miaraka amin'ny fifandanjan'ny angovo ratsy sy ny fihenan'ny tavy dia hihena koa ianao. Tsotra be izany, raha mandoro kaloria betsaka kokoa noho ny sakafo ianao, dia hihena koa. Raha te hihena maharitra ianao dia tsy misy manodidina azy: ovao ny sakafonao ary manaova fanatanjahan-tena!
Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny fomba fiasa tsara kokoa:
Voalohany indrindra, andramo ny fandehanan'ny fatinao. Satria mitarika mivantana amin'ny famoizana tavy izany. Rehefa mandoro tavy dia manaparitaka ny tavy ho asidra matavy sy glycerine ny oxygen. Mianjera miverina amin'ny tavy matavy ao amin'ny vatana ny vatana rehefa tsy ampy ny tavy amin'ny sakafo.
Ireo sakafo ireo dia manentana ny metabolism: Miaraka amin'ny zava-manitra isan-karazany, toy ny sakay, voankazo toy ny voaroy, poara, voasary, melons, plum. Rye, mofo rongony, yaourt voajanahary, sauerkraut, kôkômbra, vary ary karazan-kena maro toy ny zanak'ondry, hen'omby ary akoho.
Hamarino tsara fa mifidy fanatanjahan-tena ankafizinao ianao ary be kaloria izany. Raha tsy izany dia ho sosotra sy ho sosotra ianao amin'ny farany.
Ny finoana miely patrana fa izay te hihena dia tokony hanao fanatanjahantena dia tsy marina intsony. Nandritra ny taona maro dia narahin'ny olona maro izany hadisoana izany. Betsaka no nilavo lefona taorian'ny volana maro tao amin'ny gym ary nijanona tao anaty fahasosorana rehefa hitany fa nitombo lanja fa tsy lanja very.
Mora be ny manazava ny antony mahatonga ny fanatanjahan-tena irery tsy hahatonga anao hihena. Ho diso fanantenana ireo miantehitra amin'ny famoizana lanja fotsiny amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena. Satria - raha tena te hihena maharitra ianao ary mitazona ny lanja dia mila manova ny sakafo fihinanao ianao. Voaporofo ara-tsiansa fa ny fanatanjahan-tena irery dia misy fiatraikany kely amin'ny lanja.
Amin'ny ankapobeny, raha te hihena ianao dia mila mandoro kaloria betsaka kokoa noho ny laninao. Ny kilao dia hanjavona miaraka amin'ny fampihetseham-batana sy ny fiovana mety amin'ny sakafo. Izay mandany siramamy sy gliosida be loatra isan'andro dia mihinana sakafo diso fotsiny ary tsy hampihena ny lanjany amin'ny fanatanjahan-tena na mitazona ny lanjany. Ny fihenan-tsakafo diso sy ratsy dia tsy azo zarina fotsiny, mila manao bebe kokoa ianao.
Raha te-hanana fomba fiaina salama ianao dia mila manao mihoatra ny fanisana kaloria fotsiny. Ny fomba tsara dia ny fihinanana sakafo voalanjalanja sy mahasalama amin'ny antonony.
Hamarino tsara fa mihena ny gliosida amin'ny hariva, avy eo eo an-dàlana mankany amin'ny endrika mahia ianao.
Ny iray amin'ireo fanatanjahan-tena mahomby indrindra mampihena lanja miaraka amin'ny sakafo mety dia ny jogging. Raha mihazakazaka adiny iray ianao dia mandoro kaloria 700 eo ho eo.
Fa raha mianjera amin'ny farafara reraka tanteraka ianao aorian'ny jogging ary mitondra ny tenanao amin'ny baomba kaloria ho valisoa, dia tsy nisy dikany ny ora fihazakazahana ho an'ny fihenan-danja.
Mba hahitana na hamaritana ireo fahombiazana voalohany dia mitaky fotoana sy fikirizana ary fikirizana be izany. Ny metabolisma matavy dia mamaritra ny fahombiazana.
Fantatrao izao hoe maninona ny fanatanjahan-tena irery no tsy mandany ny kilao. Tena mora azo izany. Lasa sarotra kokoa ny manova ny fanaonao isan'andro sy ny sakafonao ary manaraka azy ireo maharitra. Alohan'ny hanombohana fandaharana fampihenana lanja sy fanatanjahan-tena dia alao antoka fa salama ianao.
Aza miandry intsony! Atombohy amin'ny fanovana ny fiainanao. Ovao ny sakafonao ary miasà mavitrika. Miaina toe-tsaina vaovao tanteraka amin'ny fiainana. Handray anjara amin'ny fiainana amin'ny fomba mahasalama sy mavitrika kokoa ianao.
Fantatry ny ankamaroan'ny olona izany ary nanandrana azy: Sport in the
Mampifangaro ny fiainana andavanandro. Mora tokoa ny maka sary an-tsaina, saingy tena tsy mora izany. Rehefa avy nanao fanatanjahan-tena iray na roa dia tonga ny fialan-tsiny. Lasa ny faniriana ary mandreraka loatra izany rehetra izany.
Raha manao fanatanjahan-tena tsy tapaka ianao dia tsy hahatsapa ho salama kokoa, fa ho tsara kokoa koa, ho salama ary ho mavitrika kokoa.
Raha ny fanatanjahantena no resahina, ny ankamaroan'ny olona dia mila antony lehibe hanombohana voalohany. Matetika ianao koa dia mila antony hahatratrarana tanjona tena voafaritra. Indraindray dia ny famoizana lanja na handresy aretina. Ny antony iray dia mety hoe tsy afa-po amin'ny tenanao sy ny vatanao ianao. Angamba mifoha maraina ianao ary mikasa ny hihinana fahasalamana ary ho fanatanjahan-tena bebe kokoa amin'ny farany.
Angamba tadiavinao foana ny hanana toe-tsaina tsara kokoa sy hahatsapa ho mahay? Na inona na inona antony mahatonga anao maniry hanao fanatanjahan-tena bebe kokoa, arakaraka ny anazavanao, dia ho hitanao ny vahaolana amin'ireo sy ireo olana hafa.
Raha nahita ny antony mety ianao, nahoana ianao no te hampiditra fanatanjahan-tena amin'ny fiainanao andavan'andro ary mampihena ny lanjanao, fotoana izao hahitanao ny fanatanjahan-tena mety ho tianao mandritra ny fotoana lava. Ny fanatanjahan-tena maharitra toy ny jogging, bisikileta na mandeha, izay azonao atao mandritra ny 45 minitra, dia tena manampy.
Ataovy ao an-tsaina anefa izany. Tsy mila mihatsara isaky ny manao fanatanjahan-tena ianao; ny tena zava-dehibe dia ny fanatanjahan-tena tsy tapaka ary mifalifaly. Rehefa raisinao ho mora izany dia ny mihetsika fotsiny no ilaina fa tsy ny manararaotra tena samirery. Ity no fomba tsara indrindra hampifangaroana ny fanatanjahantena amin'ny fiainanao andavanandro.
Fa mbola afaka mandrisika ny tenanao ihany ianao. Apetraho ny fahombiazanao. Mametraha tanjona manokana. Ohatra, azonao atao ny mieritreritra izay fanatanjahan-tena tianao hatao amin'ny ora firy. Fantaro ihany koa ny ora marina. Soraty tsara ny fotoana tianao hanaovana ny fanatanjahanao. Tsindrio ilay efajoro rehefa nahatratra ny quota-nao.
Ny olona te-hampihena na hihazona ny lanjany dia manoratra amin'ny antsipiriany ny zava-drehetra ary ao an-tsaina ny fahombiazany.
Ny olon-drehetra dia afaka mahatratra ny nofinofiny amin'ny alàlan'ny programa fanatanjahan-tena mahomby. Ny idealy hatsarana dia mazava ho an'ny rehetra, ny vehivavy sy ny lehilahy ankehitriny dia tokony ho mahia sy mahia. Mampalahelo fa amin'ny tena fiainana dia hafa mihitsy izany. Maherin'ny antsasaky ny eropeana afovoany dia lavitra ny nofinofisiny, heverina ho matavy loatra izy ireo.
Ny olona tsy manana olo-malaza dia mahalala ny olany ary mahafantatra fa tokony hanao zavatra ho an'ny tenany sy ny vatany izy ireo. Saingy ny ankamaroan'izy ireo dia tsy afaka ny hanao izany.
Ho an'ny maro, ny fananana tarehimarika amin'ny nofy dia misy tombony ihany koa. Mbola misy ny tsaho fa ny olona tsara tarehy manana endrika mahia dia manana fotoana mora kokoa amin'ny fiainana. Izy ireo koa dia tokony hanana fotoana tsara kokoa amin'ny fiainana miasa miaraka amin'ny fianarana tsy dia tsara sy ny mari-pahaizana. Fa - tsy noho ireo antony ireo ihany, maro no maniry ny hampihena ny lanjany ary ho tsara tarehy kokoa.
Ny hoe mahia dia tsy midika hoe manintona. Ny vatana koa dia mety ho tsy salama aorian'ny fihenan'ny lanja. Ny fihenan-danja koa dia manapotika ny hozatra ary mahatonga ny vatana ho salama sy marefo.
Tsy afaka mahazo endrika tonga lafatra ianao amin'ny fihinanana kely. Tsy afaka mamita ny nofinofisinao amin'ny sakafo mety sy programa fanatanjahan-tena mahomby ianao.
Torohevitra manan-danja ho an'ny tarehimarika nofy miaraka amin'ny programa fanatanjahan-tena mahomby
Raha te hihena ianao, tsy midika akory izany hoe mila mihinana ampahany kely ianao ary noana tsy tapaka. Mihinàna sakafo ambany kaloria betsaka araka izay tratra, toy ny legioma sy salady, isaky ny misakafo. Afaka afa-po ianao raha tsy mandany kaloria be loatra.
Ny lakilen'ny endrika tsara dia tsy ny mosary sy ny fijaliana, fa ny sakafo ara-tsaina sy ny fanatanjahan-tena mety. Ny kaloria dia tokony mifanaraka amin'ny tahan'ny metabolika basal.
Nahita fanatanjahan-tena misy fanjifana kaloria avo indrindra izahay: jogging, mandany 400 kaloria ny vatana ao anatin'ny 30 minitra, milomano eo ho eo amin'ny 340 kaloria, kalôzy 420 mitsambikina ary squash 450 kcal.
Amin'ny ankapobeny, zava-dehibe ny fahalalana fa ny endrika fampihetseham-batana rehetra dia hanampy anao hanana endrika tsara kokoa. Na inona na inona fanatanjahan-tena fidinao, ny tena zava-dehibe dia ny fahafinaretana, ny fikirizanao mandritra ny fotoana lava ary, ambonin'izany rehetra izany, dia manao fanatanjahan-tena tsy tapaka ianao.
Raha tianao ny fanatanjahantena mitaky ara-batana dia manana fihinanana kaloria avo koa ianao. Aleo fanatanjahan-tena manavesatra hozatra isan-karazany araka izay azo atao.
Rehefa miofana amin'ny skater inline, hozatra samihafa no ampiasaina kokoa noho ny amin'ny bisikileta. Mandany kaloria goavambe izany. Na inona na inona fanatanjahan-tena nofidinao ho anao, zava-dehibe ny mahafinaritra azy ary ny hahatratraranao haingana ny tarehin-nofinao.
Ny lakilen'ny endrika nofinofisinao dia ny fanatanjahan-tena sy ny sakafo voalanjalanja. Misy vokany tsara amin'ny fahasalamanao izy ireo ary manampy anao hihena. Raha tsy mahomby ny fiezahana hampihena ny lanjany, na dia mihaino ny fihinanana kaloria aza ireo voakasik'izany rehefa misakafo ary voafehy ihany koa dia misy zavatra tsy mandeha.
Rehefa mitombo ny kaloria, mampihena ny fihinanana ny vatana ary mety ho tsikaritra ny vokany yo-yo.
Atombohy amin'ny zavatra manan-danja indrindra, soraty firy ny kilao tianao ho very. Ka namaritra tanjona ianao. Eritrereto hoe inona ny fihenan-danja tsy dia avo loatra ary azo atao. Voalohany indrindra, manomboka amin'ny fihenan-danja be loatra. Ny fahombiazana azo avy eo dia hanampy anao hanatratra tanjona lehibe kokoa. Raha te ho very tavy iray kilao ianao dia tsy maintsy mandoro kaloria 3500 XNUMX nefa tsy averinao ao amin'ny vatanao izany angovo izany.
Raha te hihena ianao dia zava-dehibe ny fanaovana fanatanjahan-tena satria ho mora kokoa sy maharitra kokoa ny hihena. Rehefa mitombo ny fihinanana kaloria ao amin'ny vatana dia manampy amin'ny fihenan-danja ny vatana.
Ny fanatanjahan-tena dia tsy vitan'ny hoe mampiroborobo endrika mahia iray ihany, fa koa fahasalamana sy fahasalamana. Ny endrika fanatanjahan-tena rehetra dia mahasoa ny vatana.
Mitadiava fanatanjahan-tena mety aminao. Manavaka ny fanatanjahan-tena fiaretana sy ny fampiofanana mavesatra:
Amin'ny fanatanjahantena fiaretana, ny fifantohana kaloria avy hatrany dia ny fifantohana.
Rehefa mihazakazaka ianao dia afaka mandoro kaloria 300 ao anatin'ny antsasak'adiny.
Amin'ny fampiofanana mavesatra, ny tanjona voalohany dia ny fananganana hozatra.
Ny fananganana hozatra dia misy vokany maharitra. Arakaraka ny maha-hozatra anao no betsaka ny kaloria azonao dorana. Mba hahitana vokatra tsara indrindra dia tokony hanao fanatanjahan-tena mandritra ny 30 minitra isan'andro na adiny 1 isan'andro ianao. Ny tena zava-dehibe dia ny fanatanjahan-tena tsy tapaka sy tsy tapaka.
Raha manam-potoana kely ianao noho ny asanao na amin'ny antony hafa dia tokony hiezaka ny hampiditra fanatanjahan-tena tsy tapaka amin'ny fiainanao isan'andro ianao. Miezaha mandeha na bisikileta hiasa araka izay tratranao.
Betsaka ny fanazaran-tena kely azonao ampidirina amin'ny fanazaran-tena isan'andro. Rehefa mahandro na miborosy nify, ohatra, dia afaka mikorisa amin'ny rantsan-tongotra sy mandoro kaloria. Mandehana mitsangana ary sintomy ny vavoninao.
Raha te handany lanja maharitra sy mahomby ianao dia tsy misy fanalavirana fanatanjahan-tena. Ny fanatanjahan-tena dia afaka manampy ny fahasalamanao, hahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa, ary ho salama kokoa ianao.
Jogging | Fitness sy fanatanjahan-tena
Yoga | Fahasalamana ara-panatanjahantena
Zana-tsipìka | fanatanjahan-tena
Fiofanana lanja ho an'ny vehivavy | fanatanjahan-tena
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 6. May 2021 15. Jolay 2021 Sokajy Wellness, Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tenaKeywords mihena, Abnehmen durch Sport, dauerhaft abnehmen, Fitness, Fanatanjahantena
indray Lahatsoratra taloha: Fitsangatsanganana any Alemana sy Eropa | fialan-tsasatra
more Lahatsoratra manaraka: Fanorana ao an-trano | Wellness
Fikarakarana orkide | ZAVAMANIRY
Ny nofin'ilay supermodel
Balkon, zaridaina & zavamaniry (3)